एकदिबसिय मान्यता : नेपालले कस्तो फाइदा पाउने ? - Hamro Nepal Cricket
भोलि नेपाल र पि.एन.जि भिड्दै
डिभिजन दुइमा उत्कृष्ट दुइमा रहदै नेपालले बिश्वकप क्वालिफाएरमा स्थान बनाएको हो। नेपालले पहिलो खेल जिम्बाब्वे बिरुद्द खेलेको थियो जसमा , जिम्बाब्वेले नेपाललाइ ३८१ रनको लक्ष्य दिएको थियो। नेपालले सोही खेलमा २६४ बनाउदा , खेल ११६ रनले हार्न पुगेको थियो।
सुपर सिक्सको लक्ष्य रहेको टिम नेपालको अब सुपर सिक्सको सम्भावना सकिएको छ तर विशेष लक्ष्य यानी एकदिबसिय मान्यताको सम्भावना भने अझै जिबितै रहेको छ।
सो लक्ष्य बाट नेपाल एक कदम मात्र टाढा छ। नेपालले एकदिबसिय मान्यता पाउन भोलि पि.एन.जिलाइ पराजित गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालले भोलि पि एन जिलाइ जितेर मात्र हुदैन , उता हङ्कङलाई नेदरल्यान्डले हराउनु पर्ने हुन्छ।
नेपालले पि एन जिजिलाइ जित्दा , नेदरल्यान्डले हङकङलाई हराए नेपालले एकदिबसिय मान्यता पाउने हो। यदि हङकङले नेदरल्यान्डलाई जित्यो भने नेपालले फेरि हङकङ सङ्ग जित्दा नेपालले एकदिबसिय मान्यता पाउने हो।
एकदिवसिय मान्यता पाए के के पाउछ त सेवा सुबिधा अर्थात के हुन्छ त फाईदा ? एक दिवसिय मान्यता पाए नयाँ प्रशिक्षक देखी लिएर टेष्टराष्ट्रसँग घरेलु मैदानमा सिरजी खेल्न पाउने सहित थुप्रै अन्य सेवा सेवा सुविधा पाउने छ ।
एक दिवसिय मान्यता पाए आइसीसीले दिने अनुदान सहयोगमा द्धोब्बरले बृद्धिगर्ने छ । अहिले दिने गरेको रकम भन्दा धेरैनै बुद्धि हुने छ । अहिले ठयाक्कै यतिनै भन्न त सिकन्न । तर अहिलेको भन्दा द्धोब्बरले भन्दा पनि अझ बढि सहयोग गर्ने छ ।
जस्ले गर्दा नेपालमा ठुला ठुला घरेलु प्रतियोगिता गर्न नेपाललाई सहज हुने छ । अहिले क्यान निलम्बनमा रहेकोले अप्रिलमा यसको छिनो फानो लाग्ने छ ।
क्यानमाथीको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने की सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय लिने छ । फुकुवा भए क्यानले सबै कुरा हेर्ने छ भने सदस्ता गुमे आईसीसीले रेखदेख गर्ने छ ।
नेपालमै अन्तराष्टिय खेल र सिरिज
नेपालले एक दिवसिय मान्यता पाए घरेलु मैदानमानै थुप्रै सिरिज हुने छन् । त्यतिनै मात्रमा नेपालले अन्य देशमा गएर पनि खेल्न पाउछ । बर्षमा एक दुई ओटा अभ्यास अन्राष्ट्रिय क्रिकेट होइन महिनै पिच्छे फरक फरक राष्ट्रसँग खेल्न पाउछ ।
नयाँ क्रिकेट मैदान
नेपालले एक दिवसिय मान्यता पाए क्रिकेट स्टिुडिम नयाँ बन्ने छ । जस्ले गर्दा नेपाली क्रिकेटमा क्रिकेट बाताबरण झनै विकास हुने छ । टि.यु क्रिकेट मैदानको मात्र निर्भर अन्त्य हुने छ ।
नेपाली क्रिकेटले लामो समय देखी प्रशिक्षक जगट टमटाले हेरि रहेका छन् । अन्य प्रशिक्षक ल्याउने क्षमता छैन । क्यान निलम्बनमा रहेको छ । यदी नेपालले एक दिवसिय मान्यता पाए नयाँ ब्याटिङ, बलिङ प्रशिक्षक राम्रा पाउने छ ।
जति महगो भएपनि आईसीसीले सबै खर्च तिर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ प्रशिक्षकले नेपाली खेलाडीको क्षमतामा निखार पन आउने छ । । जस्ले गर्दा नयाँ प्रशिक्षक पाउन एक दिवसिय मान्यता पाउनै पर्छ ।
बलियो प्रतिदोन्दीसँग अभ्यास
नेपालले अहिले कुनै अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट खेल्नु पर्यो भने प्राय भारतका स्थानीय क्लव सँग मात्र खेल्न पाउछ । ठुला टिमसँग खेल्न पैसा पुग्दैन तर एकदिवसिय मान्यता पाए त्यसको अन्त्य हुने छ ।
नेपालले भनेको देशसँग अभ्याससँग खेल्न पाउने छ । क्लवसँग अभ्यास गनु पर्ने परे पनि नेपालले आफु भन्दा कमजोर टिम होइन बलियो टिमसँग अभ्यास गर्न पाउछ ।
टेष्ट राष्टसँग खेल्न पाउने
नेपालले एक दिवसिय मान्यता पाए टेष्ट्र राष्टसँग अन्तराष्टिय म्याच र श्रींखला खेल्न पाउने छ । अहिले नेपालले एसोसियट राष्ट्रसँग मात्र खेल्ने गरेको छ । जस्ले गर्दा नेपालबाट राम्रा भन्दा राम्रा क्रिकेट खेलाडी उत्पादन हुन्छन् ।
नेपाली क्रिकेट खेलाडी बषर्मा प्रया दुई तिन महिना केहि खेलाडी मात्र ब्यस्त हुने गरेको पाइन्छ । तर एक दिवसिय मान्यता पाए नेपालले धेरै भन्दा धेरै अन्तराष्टि खेल खेल्ने हुनले पुरै समय मैदानमा ब्यस्त हुने छन् । सबै खेलाडीले अन्तराष्टिय खेल खेल्न पाउछन् ।
सर्वाधिक पुरस्कार राशीको क्रिकेट लीग डीपीएललाई आइसीसीको मान्यता